Ukuvuka Komvini | Martech Zone
NgeSonto, ngoFebhuwari 16, 2014 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
iza yethulwe ngonyaka odlule futhi yaba nempumelelo impela. Cabanga ngeVine njengenguqulo yevidiyo ye-Twitter, lapho urekhoda khona iziqeshana ezifushane zevidiyo bese uzilayisha. Akumangazi ukuthi i-Twitter ithenge iVine futhi yahlanganiswa idlala amavidiyo avela ku-Twitter nalapho kukhona izinhlelo zokusebenza. Uma usebenzisa uhlelo lokusebenza, ikhamera iqopha kuphela ngenkathi kuthintwa isikrini, ikuvumela ukuthi wenze amavidiyo amahle.
Nasi isampula sendlela Abathengisi abasebenzisa ngayo iVine:
Kanye ne-infographic, uTamba ubhale okuthunyelwe ku- kungani ukukhula kweVine kufanele kube nentshisekelo kubakhangisi. Kubandakanya i-stat ethokozisayo - ngokusho kwe-Unrulymedia, amaVines abhalwe uphawu mancane amathuba okuthi abiwe kunamavidiyo avame ukwenziwa uphawu. Ingabe umkhiqizo wakho useVine okwamanje?
Tags: marketingAmavidiyo Wokumakethaukumaketha umviniumvini twitter
I-CoSchedule: Ikhalenda Lokuhlela Nokushicilela Komphakathi le-WordPress
I-URL entsha: Hlanza ama-URL wakho wokwabelana
Feb 17, 2014 ngo-3: 48 AM
Ukuphakama nje phezulu: Umbhalo awufomethwanga kahle. Azikho izikhala phakathi kwamagama.